Torolàlana momba ny fanamby Wizard Tower - Famerenana amin'ny laoniny Druid | Kilasy, Druida, Torolàlana amin'ny lalao, mpitsabo | WoW Guides | WoW Guides
Mage Tower Challenge Guide - Famerenana amin'ny laoniny Druid
Adrian Da Cuna | | fianarana, Druids, Game Guide, Mpanasitrana
Aloha! Izahay dia mitondra anao ny torolàlana Mage Tower Challenge ho an'ny Famerenana amin'ny laoniny Druid nataon'i Mary Rockatansky miaraka amin'ireo talenta, fitaovana ary taktika natolotra tamin'ny dingana samihafa amin'ny ady.
1 Mage Tower Challenge Guide - Famerenana amin'ny laoniny Druid
2 Dingana fanoherana
Ny fanambin'ny Tilikambon'i Magi, amin'ny misiôna manokana Atsaharo ny fandrahonana tafakatra Izy io dia mifototra, toy ny sasany hafa, amin'ny fahalalana ny specialty, fahaiza-manao iray, nefa amin'izany ny ambaratonga avo kokoa amin'ilay zavatra dia mety hanome antsika olana sasany amin'ny dingana farany, araka ny ho hitantsika manaraka.
Ity fanamby ity dia misy dingana 7, izay ahafahantsika mamerina mana ary miandry azy ireo hamelombelona ireo cooldown fahaizany aza.
Fantatsika fa ny hoditra azon'ity fanamby ity dia tsy ho azo amin'ny fanitarana manaraka, noho izany dia mbola manana volana vitsivitsy sisa isika ahafahantsika mampiseho azy ireo amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny Transmogrification malalantsika.
Ny fahitana an'i Velen amin'ny ho avy (indrindra ho an'ny fanasitranana ny npcs amin'ny dingana 5)
safosafo (miaraka amin'ny talenta hodi-kazo dia hanome antsika fanasitranana fanampiny sy fanalefahana fahasimbana)
filan-kevitra (manasitrana tanjona kendrena)
Prydaz, sangan'asan'i Xavaric (ilaina indrindra amin'ny dingana voalohany fa mitandrema tsara amin'ny fanaovana azy amin'ny dingana farany noho ny ampingany satria mety hanakana ireo mekanika tena ilaina amin'ny dingana 7 amin'ny fampidinana ny fiainantsika)
Manantitrantitra aho fa omena torohevitra izy ireo, mba hampandefasana fotsiny ny fanambintsika, fa tsy ilaina velively mba hamitana izany.
Rune Augment Rune
Mizara ho azy ny fanamby dingana fito:
Ny vondrona misy antsika dia hisy mpiady, izay hanao ny anjara toeran'ny tank (Commander Jarod Shadowsong), anjara andraikitra dps melee, rogue (Callie carrington) ary anjara asan'ny dps laharana, mpihaza (Granny Marl).
Ho fanampin'ny mekanika isaky ny dingana, dia hitazona ny npc namana izay hahazo fahasimbana bebe kokoa, mazàna ny tankinay Voninkazo fiainana y hodi-kazo rehefa mandray fahasimbana mahery vaika izy, ankoatry ny fitazomana ny tarika tarika iray manontolo Fanavaozana ary mijanona amin'ny tongony Voninkazo.
Amin'ity vanim-potoana ity dia hahita onja maro karazana npcs feno fankahalana isika, izay misy karazany 3:
KOLUPOTA NOHO AN'NY ARBALESTA: Ny fahaizany manaikitra raha mahatratra ny mpilalao izy io, mandatsaka ny mana rehetra ao aminy, izay azo inoana fa mety hahatonga ny fahafatesan'ny npc sasany ao amin'ny vondrona noho ny tsy fahampian'ny fanasitranana ary noho izany ny faran'ny fanamby. Isaky ny matetika dia hanao an'io fahaiza-manao io izy, voamarika amin'ny zana-tsipìka manga lehibe eo amin'ny tany.
MAGISIANINA NOHO AN'NY KOLIKOLY: Ny fahaizany Arcane Lightning Attack dia manangona hery amin'ny fotoana mandeha ary manimba hatrany ny vondrona iray manontolo.
MPIVAROTRA REHETRA NOHO IZAO: Ny fahaizan'ity dihy antsy knc ity dia miteraka fahasimbana amin'ny vondrona iray manontolo. Matetika izy io dia manamboatra, mazàna ilay mpilalao ary manafika azy.
KOLUPOTA NOHO AN'NY ARBALESTA: Mba hanoherana ny fanindronany mana, misy safidy roa isika, ampiasao rivodoza manelingelina ny fahafaha-manao, na mametraka ny tenantsika ao ambadiky ny tanky Jarod anay ka izy no mahazo ny fanafihana, mitandrina hatrany amin'ny fiainany satria hahazo fahavoazana be dia be izy.
MAGISIANINA NOHO AN'NY KOLIKOLY+KOLUPOTA NOHO AN'NY ARBALESTA: Ny hataontsika lohalaharana MAGISIANINA NOHO AN'NY KOLIKOLY, satria miresaka fahasimbana be dia be amin'ireo lasibatra sendra ao amin'ny vondrona, ankoatry ny fahasimban'ny arcane manangona etsy ambony. Hiezaka foana izahay hisoroka fa mihoatra ny fanangonam-bokatra 3 izany, hampiasainay rivodoza hampidina ny voangonao ho aotra.
Miaraka amin'ny KOLUPOTA NOHO AN'NY ARBALESTA hampiasa ny paikadin'ny fampiasana izahay, aleo ny tankinay, ho ampinga, ka hiala rivodoza hanelingelina irery ilay mpanao majia.
MAGISIANINA NOHO AN'NY KOLIKOLY+MPIVAROTRA REHETRA NOHO IZAO: Tanjona voalohany, MAGISIANINA NOHO AN'NY KOLIKOLY, manelingelina ny fiangonany amin'ny alàlan'ny rivodoza, na dia tsy maintsy tadidintsika aza fa afaka manelingelina npcs maromaro isika miaraka amin'ity fahaizana ity, ka raha ny MPIVAROTRA REHETRA NOHO IZAO manatanteraka ny dihiny antsy dia azontsika atao ny manapaka azy roa.
Rehefa ny MPIVAROTRA REHETRA NOHO IZAO mifarana amin'ny fahaizany, hataony manamboatra isika, izany hoe hanamboatra ilay mpilalao izy ary hanafika azy.
Afaka mandositra mampiasa isika Biby mampatahotra na miorim-paka amin'ny Faka fakany. Raha manapa-kevitra ny tsy handositra isika dia manana safidy hampiasa ny endrika bera ary hanoherana ny fahavoazana mety ho azontsika volony vy y hevitra feno valiny.
MAGISIANINA NOHO AN'NY KOLIKOLY+ 2 MPIVAROTRA REHETRA NOHO IZAO: Ny laharam-pahamehana indray dia ny mpanao majia, manelingelina ny fiangonany amin'ny Typhoon, ary tahaka ny tamin'ny dingana teo aloha, manandrana manararaotra ny zava-misy fa io fahaiza-manao io dia eo amin'ny faritra ahafahana manelingelina ny miaramila roa ary koa ny dihin'izy ireo.
Rehefa mifikitra amintsika ny miaramila dia afaka mampiasa indray isika Biby mampatahotra, mihazakazaka, Faka fakany na tanko izy ireo amin'ny endrika orsa mampiasa volony vy y hevitra feno valiny.
MAGISIANINA NOHO AN'NY KOLIKOLY+MPIVAROTRA REHETRA NOHO IZAO+KOLUPOTA NOHO AN'NY ARBALESTA: Toy ny mahazatra foana ny mpanao majia. Amin'ity dingana ity dia afaka manipy isika Amponga fahatezerana, fampiasana Fahatongavana ho nofo: hazon'aina ary ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fanalefahana ny fahasimbana ho avy. Aza matahotra mampiasa cd eto.
Tahaka ny tamin'ny dingana teo aloha, ankoatry ny fanapahana ny fiangonan'ny mpanao majia sy ny miaramila, dia hojerentsika ihany koa ny arbalest sy ny fanindronany mana, kokoa ny fampiakarana ny tankinay ho ampinga mba hahazoany ny fanafihana.
Ary miaraka amin'ity onja ity dia tapitra ny dingana voalohany, azontsika atao ny mamerina mana, miandry ny cooldowns hamelombelona, ​​hanova angano, talenta sns.
Tsy maintsy hanaraka ny vondrona misy antsika any Torreón izahay.
Ny mpilalao dia avela irery amin'ity dingana ity, izay misy faritra maromaro. Raha ampitahaina amin'ny dingana voalohany dia tsotra be izy io, saingy toy ny mahazatra, raha tsy mitandrina isika, dia mety hamono antsika ny tsy fahombiazana. Manana 5 minitra hamitaana ity dingana ity isika.
Hifikitra amin'ny Voninkazo fiainana y Fanavaozana hialana amin'ny fahavoazana ho azontsika, raha manjary ratsy ny zavatra dia ampiasaintsika amin'ny endrika orsa volony vy y hevitra feno valiny.
Voalohany dia miseho ao amin'ny efitrano misy maso iray manjombona isika: ireto maso ireto rehefa novonoina dia nipoaka ary nanimba, noho izany dia tsy maintsy vonointsika tsirairay izy ireo, mitazona ny fiainantsika ho feno eo anelanelan'ny iray. Arakaraky ny halavantsika, no vao mainka manimba azy ireo, koa na dia amin'izao fotoana izao aza dia zava-dehibe ny tsy manajamba ny masontsika amin'ny hafainganam-pandeha, ny farany kosa dia tsy mety ihany koa.
Ny efitrano manaraka dia misy Fel Guard miaraka amin'ny ramanavy 3 sy Fel Orbs roa tsy marin-toerana. Maty amin'ny daroka tsotra ireto orb kely ireto, saingy mitandrema, miverina indray izy ireo ary ny iray amin'izy ireo dia mandehandeha manodidina an'io efitrano io, tsy tokony hialantsika ny mikasika ny iray amin'ireto orb ireto satria hanaitra antsika mandritra ny segondra vitsy ary mety hametraka antsika amin'ny serieux olana, ka tsy maintsy mamono ny mpiambina Vil sy ny ramanavy isika, hiantoka hatrany fa tsy hivoatra indray ny orb, na raha toa ka tsy tonga any amin'ny lalana misy antsika izy ireo.
Raha vantany vao resy ny demonia sy ny ramanavy, dia hanokatra varavarana hitondra antsika amin'ny tohatra sasany izay hahitantsika npcs mpinamana 4 izahay, ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy azo lazaina ho toy ny tamin'ny dingana voalohany, izay tsy raharahantsika voalohany. Hiatrika ny npcs aloha izahay:
Ny iray amin'ireny npcs dia mihazakazaka miakatra sy midina amin'ny tohatra matahotra, mitandrema tsara, raha manakaiky loatra izany dia hampatahotra ny mpilalao mandritra ny segondra vitsy, ka io no hataontsika lohalaharana ary hampiasa izahay Fitsaboana ny natiora Ao anatin'izany, aorian'izany dia tsy maintsy mailaka isika ary manasitrana ireo npcs mpinamana telo hafa satria mihena haingana ny fiainan'izy ireo ary raha tonga amin'ny aotra dia ho lasa miaramila natsangana tamin'ny maty izy ireo, afaka mandositra antsika ny roa, fa ny roa kosa mila fotoana lava handresena azy ireo angamba tsy handalo ny dingana ara-potoana isika, tadidio fa manana 5 minitra isika hamitana azy.
Ho an'ity no hampiasainay Fanavaozana izy rehetra, mameno ny fiainany mitsimoka indray y Swiftmend. Afaka mampiasa koa isika fitomboana toy ny fahaiza-manao fototra alohan'ny hamenoana ny roa hafa.
Hahatratra ampahany amin'ny tohatra hafa isika izao, feno felbe tsy mitombina amin'ity indray mitoraka ity. Hampiasa izahay Afo avy amin'ny masoandro hampiatoana azy ireo ary handeha eo anelanelan'izy ireo isika, mitandrina mba tsy hikasika azy ireo na dia tsy miasa aza izy ireo, satria miadana izy ireo.
Farany dia hahatratra varavarana iray izay tsy maintsy hosokafantsika isika ary ao no hahitantsika ilay mpanao kolikoly Vile sy maso telo manjelatra, ireo no hatao laharam-pahamehana, toy ny amin'ny tapany voalohan'ity dingana ity, mamono tsirairay azy ireo ary manilika ny mason'ny laser fa ilay mpanao kolikoly mamoaka. Mampiasa fanasitranana fanampiny na endrika fanamoriana izahay raha tsy ampy ny HoTs. Raha vantany vao nesorintsika ireo maso manjelatra dia hamarana ilay mpanao ratsy isika ary hiaraka aminy io dingana io.
Mihaona amin'ny vondrona misy antsika indray izahay, amin'ity dingana ity dia afaka mamerina mana ary miandry azy ireo hamelombelona ny fahaizany amin'ny cooldown isika.
Amin'ity dingana ity dia hihaona amin'ny lehiben'ny fanamby isika. Lord Erdris Thorn.
Hihombo ny tarika misy anay ary hifampitolona izy ireo, raha Lord Erdris Thorn Handeha mankeny afovoan'ny efitrano izy ary hanandrana handray 3 npcs amin'ny onja maromaro izay tsy maintsy atsanganantsika ny fiainany alohan'ny ahatongavan'izy ireo eo aminy, sady mitazona ny vondrona misy antsika koa raha mbola mifamely izy ireo.
Ny laharam-pahamehana amin'ny fanasitranana ireo npcs izay manakaiky ny sefo ireo, dia miankavia sy miankavanana rehefa miditra ny efitrano. Ny antony? Ny npcs izay horaisiny amin'ity dingana ity dia tsy maintsy hatrehintsika izy ireo amin'ny manaraka, izany no antony tsy maintsy hiezahana hahazo vitsy araka izay azo atao, ary raha izany dia ataovy izay "sarotra" faran'izay kely indrindra. Ny npc amin'ny ankavia dia arbalest, ny eo afovoany dia mpanao majia ary ny iray amin'ny ankavanana dia miaramila, rehefa nihaona tamin'izy ireo tamin'ny dingana voalohany izahay. Ny arbalest miaraka amin'ny fahaizany mamoaka ny mana rehetra, ary ny mpanao majia miaraka amin'ny fahasimbany manangona, satria ny tsiriko dia mampidi-doza kokoa, satria aorian'ny fiatrehantsika azy ireo dia tsy manam-potoana hamerenana mana sy / na cooldown isika.
Tsy maintsy ataontsika velona hatrany ny vondrona misy antsika rehefa miady izy ireo ary mitazona hatrany Fanavaozana amin'ny tenantsika sy ny vondrona, ho fanampin'ny Voninkazo fiainana y Voninkazo arakaraka ny filàna ao aminy.
NO hampiasainay ao amin'ny vondrona misy anay Swiftmend satria ilaintsika izany ho an'ny npcs izay ezahan'ny lehibeny halaina.
Potion ny hery maharitra+Fahatongavana ho nofo: hazon'aina.
Hampiasa izahay Fanavaozana, mitsimoka indrayary Swiftmend amin'ny npcs manakaiky, manaparitaka ny fitomboana Mba hamenoana ny fiainany hatramin'ny farany
Onja faharoa an'ny npcs
Hampiasa izahay filaminana mitandrina ny ain'ny npcs ary raha hitantsika fa tsy tonga amin'ny fiainana feno dia fenointsika izy ireo Fanavaozana o mitsimoka indray.
Onja fahatelo an'ny npcs
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra tamin'ny dingana teo aloha, dia mila mameno ny ain'ny roa fotsiny isika, ka tonga ny fotoana hampiasa vakana, ary fanampiny hafa ampiana amin'ny HoTs antsika sy ireo fanasitranana hafa.
Eto isika dia hiatrika ireo izay Lord Erdris Thorn variana, efa miaraka amin'ny vondrona misy antsika indray, ary ny fahasarotana dia miankina amin'ny fandehan'ny dingana teo aloha.
Raha sendra tototra 3 npcs ianao, dia ho tsotra ny dingana, miova amin'ny karazana npc inona, mihoatra ny 4 no azo antoka fafana.
Ny paikady miaraka amin'ireo npcs ireo dia hitovy amin'ny dingana voalohany, mijery hatrany ny mana satria resy indray mandeha dia tsy hisy fotoana intsony hanarenana an'i mana.
Ary nahatratra ny faran'ny fanamby ihany izahay tamin'ny farany.
Eto isika dia hiatrika ny azy manokana Lord Erdris Thorn.
Na dia tsy miteraka fahasimbana betsaka amin'ny vondrona misy antsika aza izany dia tokony hitandrina ny fiainantsika ambonin'izany rehetra izany isika.
Hitsambikina amin'ny mpilalao ilay sefo, ary hamela lagila maintso amin'ny tany, izay tsy maintsy avelantsika amin'ny fomba milamina, manararaotra ny habaka ao amin'ny efitrano.
Azo tapahina io fahaizana io, fa Izahay dia TSY hanelingelina anao alohan'ny handaozanao ny puddle voalohany, satria zava-dehibe ny fampiasana azy io mba hampihenana ny fiainantsika rehefa apetratsika amintsika ny Soul Ignition, baomba iray izay rehefa mipoaka izy io dia hanaisotra ny vondron'olona anananao amin'izao fotoana izao.
Mampiasa izahay Amponga fahatezerana.
Ny antony nanombohako an'ity torolàlana ity dia nilaza aho fa ny haavon'ny entana avo lenta dia mety ho olana bebe kokoa noho ny fanampiana, dia ny tsy maintsy hampihenantsika ny fiainantsika bebe kokoa, satria mazava ho azy fa hanana mihoatra ny vondrona misy antsika isika, fa ny ny fahaizan'ny Boss mitsambikina amin'ny mpilalao ary mamela ny puddle mampihena ny fiainana amin'ny isan-jato raikitra, ka raha ambany loatra isika dia atahorana hamono antsika ity fahaiza-manao ity.
Azontsika atao ihany koa ny misoroka ny fahasimbana ataon'ny lehibeny rehefa mitsambikina mampiasa isika Biby mampatahotra na ny endrika orsa, raha sanatria ratsy tarehy be isika.
Raha maty alohan'ny fotoana ianao dia mitandrema, aza mamoaka fanahy, raha ambany ny isan-jaton'ny fiainana ny sefo dia mety ho resin'ny vondrona misy azy irery izany ary raha izany dia hitovy ny iraka ampanaovina azy.
Ary hatreto io fanamby io, raha tratranao izany dia arahaba soa ary ankafizo ny fisehoanao vaovao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Mage Tower Challenge Guide - Famerenana amin'ny laoniny Druid
Riot, Twitch ary Blizzard dia mamorona ny Fair Play Alliance manohitra ny fitondran-tena ratsy eo amin'ny fiaraha-monina
Transmédification an-tsarimihetsika tsara kokoa